Mampandry adrisa ny FATE
Raha ny « fety mora » eto an-drenivohitra amin’izao fotoana dia fanatra fa tena fanodikodinana ny sain’ny Malagasy tsy hisaina ny fahoriana nateraky ny krizy. Raha ny resaka mandeha dia maherin’ny roa miliara ariary ny vola lanin’ny FATE « hampandihizana » ny mpiray tanindrazana ao anaty fahoriana. Ny hetsika ara-miaramila hanoherana an’i Remenabila sy ny namany anefa ity toa handamoka. Fantra fa natsahatra indray izany amin’izao fotoana noho ny antony tsy fantatra mazava. Raha tena fotorina dia ahiana mbola mitovy lanja amin’ny « podium » etsy Anosy ihany io resaka Remenabila io.
Toa fandrirarirana no betsaka hoy Zafilahy Stanislas fa tsy sahy tena mirotsaka amin’ny fanafihana ny EMMONAT. Rehefa manoloana ny vahoaka an-tanam-polo anefa toy inona ery ny fahasahiana sy ny fihetsiketsehana. Teo am-piaingana hametraka ireo iraka any Befotaka ihany koa dia nilaza ny ministry ny foloalindahy FATE fa « hifampiraharaha aloha » no anton-dia tany. Raha vao mikasika ny Filoha RAVALOMANANA anefa dia sahin’ireo « be galona » ny mampiaka-peo fa « tsy azo atao ny mifampiresaka amin’ny mpamono olona ». Fehezin’ny teniny izy ireo ankehitriny ka zary mivaralila amin’izay tokony hataony manoloana izao olana goavana izao.
Fiaraha-mitantana : iangarana ny mpanongam-panjakana
Miseho lany any anaty andrim-panjakana isan-karazany any amin’izao fotoana ny fanomezana vahana sy tombontsoa manokana ny mpanongam-panjakana sy ny mpamadika tolona izay lasa manara-dia azy ireo ankehitriny. Na dia ny fitsinjovana ny fiaraha-mitantana aza no antony nidiran’ny Ankolafy RAVALOMANANA anaty andrim-pitondrana dia mazava fa ataon’ny FATE ampingan’ny halatra sy fangoronan-karena izay ataony izy ireo eo imason’ny fianakviam-be iraisam-pirenena. Nijoroan’ny CST Longin Fanapera vavolombelona ohatra ny mizana tsindrian’ila atao amin’ny Ankolafy etsy Anosy.
Tsy misitraka ny zo maha-parlemantera azy manko raha tsy mpisolelaka an’i tgv sy ny namany ary dia voasinton’izany ny mpanao politika vitsy izay tsy matotra ara-poto-kevitra. Volana maro aty aorian’ny nisitahan’izy ireo tamin’ny lalan’ny ara-dalàna dia mbola voaporofo fa « adalam-bola » ny ankamaroan’ireo nisafidy ny lalan’ny « oui monsieur le DJ ». Tsy vitsy ko anefa ireo mijoro tsara amin’ny fijery politika izay ananany ka mandray fepetra amin’ny tsy ara-dalàna izay mivandravandra amin’izao fotoana momba ny tsy fanatanterahana ny tondro zotra. Inoana fa ireo no mbola tafajanona ao anatin’ny Ankolfy RAVALOMANANA amin’izao fotoana izao.
Foloalindahy Malagasy : kanosa ... mandany volam-bahoaka fotsiny (+vidéo)
Voaporofo izao fa tsy sahy miatrika ady ny foloalindahy Malagasy ary tsy maharo ny vahoaka sy ny fanany akory. Rehefa ny olom-pirenena no miezaka maneho hevitra am-pilaminana dia mirangorango toa biby dia ry « be basy » isany fa rehefa sendra ady amin’ny manam-basy toa azy dia mifori-drambo sy tora-kovitra. Lasan-kovavany avokoa sisa ny maha-tandroka aron’ny vozona azy ireo satria tsy misy azon’ny Malagasy antenaina ny momba azy.
Raha mahoraka dia mahoraka ny mikasika ny raharaha Remenabila dia toa mangina tanteraka ny fitondrana mikasika azy io. Raha ny vaovao fantatra anefa dia lany vatsy ireo miaramila sy zandary nalefa « hampandry tany » any ary voatery niverin-dalana hanampy izany. Hatreto aloha izany dia toa tsy mbola tanteraka ny fanafihana ny fieren’i Remenabila sy ny namany fa mandany andro sy mandany volam-bahoaka any Befotaka no ataon’ireto « be bôty » ireto. Mbola lavitra aza izany fa ny eo amin’ilay fety anaty fahoriana karakarain’ny mpanongam-panjakana dia faty olona, fidorohana, halatra sy harom-paosy ary efa mandeha koa ny fanolanana amin’izao fotoana. Vao roa andro lasa izay no nahitana vata mangatsiaka-na tovovavy iray teny an-toerana. Raha ny filazann’ny nanatri-maso dia niharan’ny fanolanana faobe ratompokovavy vao notaperina ny ainy. Dia manotany tena ny ankamaroan’ny Malagasy hoe : nankaiza ireo mpitandro filaminana arivo nireharehana fa hiaro ny renivohitra mandritra ny fety?
Filoha RAVALOMANANA Marc : nahatsiaro ireo Raim-pianakaviana namoy ny ainy ho an'ny Tanindrazana
Amin'izao fankalazana ny fetin'ny Ray izao dia nitondra hafatra ho an'ny mpiara-mitolona teo amin'ny Kianjan'ny Finoana ny Filoha RAVALOMANANA. Nankasitrahiny ny fahatsiarovana manokanana azy teo amin'ny Kianja androany saingy notsindriany kosa ny fanomezam-boninahitra ireo raim-pianakaviana rehetra izay lavo noho ny fanompoana ny Firenena. Isan'izany ireo mpitandro filaminana niamboho noho ny fifandonana tany amin'ny faritra Anosy herinandro lasa izao. Ankoatr'izay dia nambarany fa eo am-piomanana amin'ny fikarakarana ny fiverenana an-tanindrazana izy ireo ankehitriny ary dia nampanantena ny Filoha fa azo lazaina tsy ho ela intsony izany.
Namafisiny hatrany ny tsy maintsy hanohizana ny firaisan-kina mba hanamafy orina ny herin'ny mpandala ny ara-dalàna amin'ny fikarohana vahaolana amin'ny krizy.Niangaviany ihany koa ny mpiara-mitolona rehetra hampita ny firarian-tsoa amin'ny fianakaviany tsirairay avy amin'izao fetin'ny loham-pianakaviana izao.
Ny teo amin'ny Kianjan'ny Finoana, araka ny voalaza etsy ambony, dia nanokana vata goavana niraiketana ireo teny mamy sy firarian-tsoa ho an'ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Tamin-kafaliana lehibe tokoa no nametrahan'ny mpitolona rehetra izany tamin'ny taratasy izay efa nozaraina mialoha ary nandrotsahan'izy ireo azy tao anaty vata mba hampitain'ireo tomponandraikitra any amin'ny Filoha RAVALOMANANA amin'ny fotoana mampety izany. Raha ny fanantenan'ny mpiara-mitolona rehetra moa dia hiaraha-manolotra izany amin'ny fotoana hahatongavany eto Madagasikara.
Nahatsiaro ireo Ray ny tao amin’ny Magro
Natao andro iray malohan’ny daty ny fankalazana y fetin’ny ray ho an’ny mpandala ny ara-dalana. Izany dia ho fanajana ny zo hiara-miaina amin’ny fianakaviana rahampitso nefa fitandroana ny tsy ho tara loatra ihany koa ao anatin’ny fifampirarian-tsoa. Arak’izany dia nisolotena ny mpiara-mitolona rehetra ny Me. Hanitra nitondra ny firariantsoa ho an’ny lohan’ny fianakaviana Malagasy manerana ny tany. Tsy hadinony indrindra ny niarahaba ny Filoha RAVALOMANANA izay zary rain’ny Malagasy maro an’isa taorian’ny 2009. Nirariany ho ambinin-java-manasatra sy hitoeran’ny fahasalamana ny Filoha ka tsy ho solafaka amin’ny adidy mbola miandry eto amin’ny Firenena.
Ankoatra ny fanentanana isan-karazany dia nisy ny mofomamy nifampizarana sy ny koba ho fanamarihana ny fiombonana samy Malagasy. Nomena tombony manokana tamin’izany ny lehilahy amin’ny maha-fetin’ny ray ny andro. Ankoatra izay dia nandray anjara feno tamin’ny fanafanana ny lanonana ireo olom-boatendry avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA.
TIM Tanora : manana andraikitra hamaha krizy (+vidéos)
Amin’ny sampana tanora ao amin’ny antoko Tiako I Madagasikara dia toe-tsaina manambany ny sala-taona misy azy ireo no nentin’i tgv nanongam-panjakana. Raha ny fiteny hatrizay mantsy dia hoavin’ny Firenena ny tanora saingy hatramin’ny taona 2009 no mankaty dia zary manalasala ny Malagasy ny manome andraikitra ny tanora noho ny traikefa ratsy nanomboka tamin’ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo tamin’ny 2007.
Manentana hatrany ny haha-tonga saina ny rehetra arak’izany ny tanora TIM mba tsy ho sodokan’ny randram-bao ka hanaraka izay hetsika rehetra milaza fa « hitondra fanovana » indray. Efa hita soritra amin’ny sasantsasany amin’ireny hetsika ireny fa tsy hamerina ny Filoha RAVALOMANANA no tanjona fa ny mbola hisian’ny fifanilihana izay fototry ny fiverimberenan’ny krizy eto Madagasikara.
Na ny TIM Tanora na ny vondron’ny fikambanana manohana ny Filoha RAVALOMANANA dia samy naneho ny fanantenan’izy ireo amin’ny fandraisana andraikitra ataon’ny FFKM. Nomarihin’ny avy amin’ny UAZD kosa anefa fa efa azo lazaina hamehana ny zava-mitranaga ankehitriny ka tokony hijery izay fomba hanafainganana ny famahana olana ireo Filoham-piangonana efatra ireo.
Vahaolana : eto Antananarivo ny fihaonana (+vidéos)
Mitaky ny hanaovana ny fihaon’ny Filoha RAVALOMANANA sy i tgv eto Antananarivo ny mpandala ny ara-dalàna. Raha ny fanehoan-kevitra rodobe nataon’izy ireo androany dia manome hasiny ny fifampidinihan’ny samy Malagasy izany ary mampahatsiahy an’ireo firenen-kafa fa manana ny maha-izy azy Madagasikara. Efa maro sahady anefa ankehitriny ireo mpomba ny mpanongam-panjakana no efa mibahana mba tsy hisian’io fihaonana io.
Misy mihitsy aza ny resaka mandeha an-gazety fa ireo manamboninahitra ambony sasatsasany mpiara-komana amin’ny mpanongam-panjakana dia efa nanao fanambarana fa tsy mitondra soa ho an’ny Firenena ny hihaonan’izy mianaka. Notsorin’ny depiote Mamitiana Ravelonanosy fa mampiseho ny fiandaniana ara-politika avy hatrany izy ireo rahatoa sahy manao izany ka tsy mendrika ho tandroka aron’ny vozona intsony.
Tsy afa-bela …
Ao anatin’izany rehetra izany dia miezaka hatrany mamita-bahoaka i tgv mba hanadinoan’ny mpiray tanindrazana ny fijaliana noho ny krizy. Ankoatra ny fifaninanan-kira izarana « vola mora » dia misy ihany koa ny fampielezan-kevitra maimaim-poana nataony mikasika indrindra ny fandraisana mivantana ireo lalao baolina kitra avy any Eoropa. Andro vitsy izao dia nanao fanambarana ny ORTM fa lalao valo monja no azon’i Madagasikara ampitaina mivantana. Akory anefa ny hagagan’ny mpanara-baovao fa dia nodokafana izay tsy izy i tgv androany satria izy hono no nividy ny lalao 24 ambiny mba ahafahan’ny vahoaka Malagasy mialavoly. Famotaham-bahoaka tsy hahomby izany satria tsy ampy hatao sakafon’ny Malagasy iray ny lalao « Euro2012 » na haverimberina amin’y fahitalavitra aza. Manginy fotsiny ny fahatsapan’ny mpiray tanindrazana fa nampiasaina hisintomana ny fon’ny vahoak any aminy io resaka lalao baolina kitra io.
Ankoatr’izay dia samy nanentana ny mpiara-mitolona ireo nandray fitenena rehetra mba hanohana ny FFKM ao anatin’ny andraikitra masina raisiny hamahana ny krizy. Hifamontoana any amin’ny EKAR Ambatonilita arak’izany ny mpandala ny ara-dalàna rahampitso tolakandro hanotrona ireo Raiamandreny am-panahy ireo amin’ny fotoam-pivavahana fanokafana ny asan’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara.
Magro : handray vahiny hafakely … (+vidéo)
Handray vahiny avy ao amin’ny tafika ny Kianjan’ny Finoana ato ho ato araka ny nambaran’ny CT iray avy any Vakinankaratra. Nambarany fa mizotra mankany amin’ny fampandresena ny tolon’ny mpandala ny ara-dalàna izany fihetsika izany. Araka ny fantatra androany ihany koa dia hoavy tsy ho ela ihany koa ireo CT sy CSt avy amin’ny firehana hafa hanatevin-daharana izany fitakiana ny fiverenan’ny ara-dalàna izany.
Noporofoin’ity mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita ity androany fa misavoritaka tanterakan ny FATE amin’izao fotoana. Efa am-bivitra ho azy ireo mantsy ny fahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA izay atahorany fatratra hany ka tena tsy mahita hisarangotana intsony ny mpanongam-panjakana. Noho izany dia zara raha misy manatrika sisa ny fivoriana any anaty andrim-pitondrana. Na dia valopolo mahery monja aza ireo parlemantera avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA dia toa nisitaka avokoa ny ankamaroan’ny ambiny satria dia zara raha misy valopolo sisa ireo miatrika ny fivoriana isan-karazany any anaty parlemanta hoy hatrany ny fampitam-baovao. Midika izany fa tsy mitsaha-mitombo ny resy lahatra amin’ny asa ratsy ataon’izao fitondrana mibodo toerana izao.
02 Jiona 2012 : vehivavy manam-pinoana i Lalao RAVALOMANANA (+vidéo)
Nankalaza ny fetin’ny Reny ny mpitolona teo amin’ny Kianjan’ny Magro androany. Nomem-boninahitra manokana ireo vehivavy mihoatra ny 60 taona ka notolorana lamba amin’ny lokon’ny Ankolafy RAVALOMANANA mba ho fahatsiarovana izany fety izany sady ho fankasitrahana azy ireo noho ny faharetany mitolona. 230 no nisoratra anarana ary dia notolorana ity fanomezana ity ny tolakandro teo. Nandritra ny fotoana nifampiarahabana kosa dia notsiahivina manokana ny vadin’ny Filoha RAVALOMANANA. Nijoro vavolombelona tamin’ny fomba fiainana sy fisainan’i Neny ny Me. Hanitra Razafimanantsoa. Nambarany fa « Finoana » no tena andry iankinan’i lalao RAVALOMANANA ka anabeazany ny fianakaviany hany ka tsy dia andairan’ny fandemen-tsaina izy ireo na dia mandalo fitsapana goavana aza.
Tamin’ireny fandrobana ny fananany sy fandorana ny fihariany ireny ohatra dia nijoro hatrany Lalao RAVALOMANANA satria « fandalovana ihany izany aminy ». Hatramin’izao fotoana mbola anenjehana mafy azy sy ny vady aman-janany izao dia mijoro ho Reny azo iantsapazana anatin’ny sarotra izy ho an’ny ankohonany. Tamin’ny fotoana nanaovan’ny DST herisetra tamin’ny zanany lahy evo ihany koa mantsy dia nentaniny mba tsy hitsahatra hivavaka izy mivady ary nampiany hoe : « tsara raha vitanareo ny miteny amin’izy ireo hoe andao aloha hiara-mivavaka » ary dia nataon’ireo zanany izany saingy nivaivain’ireo mpanafika. Nambaran’ny Me. Hanitra moa fa isan’ny vehivavy afaka mijoro sy matanjaka amin’ny foto-keviny ny vadin’ny Filoham-pirenena ary mety isan’ny atahoran’ny FATE azy izany ka tsy namelany azy hiverina an-tanindrazana na dia efa mandeha irery aza.